Maamulka qaran ee maareya dhismooyinka oo sheegay in aynan lahayn awood ay ku soo xiraan mulkiilayaasha guriyaha dumo. – The Voice of Northeastern Kenya
Maamulka qaran ee maareya dhismooyinka oo sheegay in aynan lahayn awood ay ku soo xiraan mulkiilayaasha guriyaha dumo.
Star FM December 1, 2016
Maamulka qaran ee dalkani Kenya u qaabilsan maareynta dhismooyinka ee loo soo gaabiyo NCA ayaa shaaca ka qaaday in uusan lahayn awood buuxda oo uu gacanta ugu soo dhigi karo mulkiilayaasha guriyaha dumo iyo sido kale qandaraasleyda ka biya diida in ay joojiyaan guri dhiska kadib markii la siiyo amar howshan ku aadan.
Madaxa fulinta ee maamulka NCA Daniel Manduku ayaa shalay gudiga baarlamaanka ee arrimaha gaadiidka u sheegay in maamulka uu hoggamiyo uusan hor istaagi Karin guriyaha la sii dhisayo ee anan lahayn tayadii loogu talagalay.
Manduku ayaa carabka ku dhuftay in booliska ay ku eedeynayaan ibn aynan dhaqan gelinin amarka ka soo baxa maamulka oo ku aadan guriyaha la duminayo.
Dhanka kale mr Manduku ayaa sheegay in loo baahanyahay in isbedel lagu sameeyo sharciga dastuurka ku qoran oo ku saabsan wajibadka maamulka si dib loogu micneyo ganaax la saarayo dadka dambiyadan geysta.
Shaqada maamulka ayuu madaxa fulinta sheegay in hada ay ku koobantahay in ay booliska warqad u qoraan oo ay ku wargelinayaan guriyaha la astaameyay oo la rabo in dulka lagu daro si ay booliska talaaba u qadaan.
Xiliga uu ka dhawajinayay awood darada heysata maamulka ayuu madaxa fulinta ee NCA ka jawabayay suaalo laga weydiiyay guri ka kooban 10 dabaq oo horaantii bishii Novembar ee la soo dhafay ku dumay countiga Kisii oo 10 qof ay ku dhinteen.
← Kenyaanka qaba cudurka AIDS-ka oo ay suurta gal tahay in lagu takooro goobaha shaqada
Madaxweynaha Gambia Yaxya Jammeh oo ka digay dibadbaxyo la xiriira doorshada maanta loo dareerayo ee dalkaasi →